संविधान घोषणालगत्तै वैद्यको शरणमा बाबुराम ~ FMS News Info
संविधान घोषणालगत्तै वैद्यको शरणमा बाबुराम
काठमाडौं: राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलालगायत नेता तथा सभासद् एकआपसमा बधाई साटासाट गर्दै रात्रीभोजमा सहभागी भइरहेका थिए।
तर संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भने संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेका नेकपा—माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई भेटेर संविधान जारी भएकोमा पश्चाताप र आत्मग्लानि गर्न आतुर थिए।संविधान घोषणालगत्तै संविधानसभा भवनपरिसरमा आतिसबाजी र मुलुकभर दीपावली गरेर खुसीयाली मनाइरहेका बेला भट्टराई वैद्यको धापासीस्थित निवासमा पुगेर आफूबाट गल्ती भएको गुनासो पोखिरहेका थिए।
‘मलाई खुसीयाली मनाउन, दीपावली गर्न, रमाइलो गर्न र रात्रीभोजमा सहभागी हुन मन लागेन। संविधानसभाबाट बाहिर निस्कनेबित्तिकै तपाईंलाई फोन गरें। फोन लागिहाल्यो अनि म सीधै तपाईंकोमा आएको हुँ', भट्टराईले वैद्यसँग भने।
संविधानसभामार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आफूसँग पार्टीभित्र संघर्ष गर्दै आएका भट्टराईको अभिव्यक्ति सुनेपछि वैद्य चकित खाए । ‘तपाईंको लाइन त संवैधानिक रूपमा पास गराउनुभएको छ, तपाईं बेखुसी हुनुपर्ने के रह्यो र? ' वैद्यले भट्टराईलाई सोधे।
भट्टराईले जबाफ दिए, ‘खै, हुनत हो तर मलाई चित्त बुझेको छैन । बहुमत अल्पमतमा संविधान बनाउने कुरा चित्त बुझेन।' उनले कम्तीमा पनि मधेसी र थारूका समानुपातिक र समावेशीको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर समेट्नुपथ्र्यो भन्दै पश्चिममा शेरबहादुर देउवा र भीम रावल, पूर्वमा केपी ओली र कृष्ण सिटौलाले अहंकार प्रदर्शन गरेर विखण्डनको स्थिति उत्पन्न गराएको आरोप लगाएका थिए।
नेकपा-माओवादीका सचिव देव गुरुङका अनुसार झापा, मोरङ र सुनसरीलाई मधेस प्रदेशमा ओली र सिटौलाले राख्न नदिएको र कैलाली कञ्चनपुरलाई थारू क्लस्टर क्षेत्रमा समेट्न देउवा र रावलले नदिएको भट्टराईले बताएका थिए। 'त्यसो भए अब तपाईंको विकल्प के हो त?'
वैद्यले प्रश्न राख्दा भट्टराईले भने, 'तत्कालका लागि नयाँ ढंगले सोचेर रूपान्तरित संसद्बाट यही संविधान संशोधन गर्ने अभियान थाल्छु । दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको लाइनलाई पुनर्विचार गर्नु पर्नेछ। नयाँ विचार, नयाँ नीति र नयाँ संगठनका बारेमा नयाँ ढंगले सोच्नु पर्नेछ । त्यसका लागि सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने भएको छ।'
वैद्यले फेरि सोधे, ‘एमाओवादीमै बसेर कि?' भट्टराईले जबाफ दिए, ‘लामो समय त्यहाँ पनि बसिएलाजस्तो लाग्दैन।' वैद्यसँग त्यसो भनेको एक साता नपुग्दै भट्टराईले एमाओवादी पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। 'कसरी यस्तो अवस्था आयो?' वैद्यको जिज्ञासामा भट्टराईले आत्मग्लानियुक्त स्वरमा भनेका थिए, ‘संविधान त लेखियो, अन्तिम समयमा पुग्दा बेठीक गरियो। हस्ताक्षर पनि गरिहालियो।'
वैद्यले फेरि सोधे, 'तपाईं आफैं सहमति जुटाउने समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो। तपाईंले मस्यौदा समितिबाट पनि त प्रस्ताव फर्काउन सक्नुहुन्थ्यो । कसरी त्यस्तो भयो त?' भट्टराईले भने, ‘त्यही त अलिकति गल्ती भयो।
तीन दलका नेतालाई छोड्दै आइयो। उनीहरूप्रति नै भर परियो। अन्तिम चरणमा मैले नयाँ ढंगले सोचौं, मस्यौदा पुनरावलोकन गरौं भनेको, तीन दलका नेताले पटक्कै मानेनन्। दुईचार दिन त परै जाओस, दुई घन्टा पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्न तयार भएनन् । उनीहरूको भनाइ र व्यवहार देखेर मैले दंग खाएँ।'
त्यस दिन भट्टराईले वैद्य निवासमा करिब ढेढ घन्टा बिताएका थिए। वैद्यले आफूसँग भट्टराईले पोखेका आत्मग्लानि र पश्चातापयुक्त गुनासालाई आफ्नो पार्टीका पदाधिकारीलाई सविस्तार सुनाए।
उक्त पार्टीका सचिव देव गुरुङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संविधानसभाबाट घोषणा भएको संविधानप्रतिको असहमति व्यक्त गर्न हाम्रो अध्यक्षलाई भेट्नुभएको रहेछ।' वैद्यसँग सहकार्यका लागि भट्टराईले कुनै प्रस्ताव नराखेको पनि गुरुङले बताए। उनले भने,'सहमति र सहकार्यको कुरा गर्नुभएनछ। नितान्त नयाँ ढंगले सोच्नुपर्‍यो भन्‍नुभएछ। विषयवस्तुलाई मूर्त रूपमा राख्नुभएनछ।'
भट्टराईका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले वैद्यसँग माओवादी आन्दोलनको समीक्षा भएको बताए। ‘खासै नयाँ कुरा त भएन। लामो समयसम्म भेट भएको थिएन। उहाँ आफैंले फोन गरेर भेट्न जानुभएको थियो। दुई नेताबीच आन्दोलनको समीक्षा भएको हो', पाण्डेले भने।
पाण्डेका अनुसार भट्टराईले अहिले सबै पक्षका रायसल्लाह लिन भेटघाट तीव्र बनाएका छन्। भट्टराई शनिबार एक साताका लागि काठमाडौंबाहिर जाने तयारीमा रहेको पनि पाण्डेले बताए।